INvidia ikhuphe ngokusemthethweni ikhowudi yeemodyuli zayo ze-GPU zeLinux | Ukusuka kwiLinux
Ubumnyama | 12/05/2022 22:51 | Izaziso
Nvidia isibhengezo ekugqibeleni ukuba ukhethe ukukhulula ikhowudi yeemodyuli ze-kernel zabaqhubi bayo kukuba inkampani ibhengeze izolo ukuba iza kwenza abaqhubi beLinux kwii-GPU zayo zifumaneke njengomthombo ovulekileyo, ukuqala ngenguqulo ye-R515, usebenzisa ilayisensi emibini ye-GPL kunye ne-MIT.
Yazisa ikhowudi yemvelaphi yeemodyuli zekernel iya kufumaneka kwindawo yokugcina ebizwa ngokuba yi "NVIDIA Open GPU Kernel Modules" kwi-GitHub, kodwa okwangoku kuphela ikhowudi yeziko ledatha ye-GPU ithathwa njengelungele ukukhutshwa kwemveliso. I-GeForce kunye ne-Workstation GPUs zithathwa ngokuba "ngumgangatho we-alpha" ngeli xesha.
UNvidia uthe ikhowudi eokwangoku iphumile kwibhokisi yeTuring kunye neziko ledatha yosapho lwe-Ampere GPUs, kulandela ukukhutshwa kancinci koyilo lolawulo lwe-GSP kulo nyaka uphelileyo. Ivavanyiwe kuluhlu olubanzi lomthwalo womsebenzi ukuze kuqinisekiswe umsebenzi kunye nokulingana komsebenzi kunye nomqhubi we-kernel-mode yobunikazi, kodwa izisa izinto ezintsha, njengesakhelo se-DMA-BUF sokwabelana ngee-buffers phakathi kwezixhobo kunye ne-subsystems, ukuba zize ngokwazo. kunye noyilo lweHopper.
Nabani na osebenzisa ii-GPUs ezinoyilo lwangaphambili lweTuring kufuneka aqhubeke nokusebenzisa abaqhubi bakudala banini. Ngokucacileyo, enye yeenjongo eziphambili ukusuka kuNvidia xa uvula ikhowudi yomthombo kwaba baqhubi kukuphucula inkxaso ye-GPU kunye nokusebenza kwee-supercomputers kunye namaziko amakhulu edatha. Phantse zonke ii-supercomputers ezinkulu ziqhuba enye inguqulelo yeLinux, kwaye ukuba nemithombo evaliweyo abaqhubi mhlawumbi ayikuthandi ukuthandwa ngabantu abanoxanduva lofakelo.
Kubantu, umfanekiso awukho rosy okwangoku, njengoko kuphela imodyuli ye-monolithic kernel eyehliweyo kuphela ithathwa njengomgangatho ongeyo-alpha. NgokukaNvidia, ukuphuculwa kulindeleke unyaka wonke. Umqhubi omtsha womthombo ovulekileyo uqhuba kwi-firmware efanayo njengomqhubi omdala kunye neendlela ezifanayo zokupakisha, ezifana neCUDA, OpenGL, kunye neVulkan. Ukongeza, inkampani yathi izilungiso ezingeniswe luluntu ziya kuqwalaselwa ukuba zibandakanywe kukukhutshwa kwabaqhubi kwixesha elizayo.
Ngokufumaneka kweepakethe ezidityanisiweyo ngokupheleleyo kunye nekhowudi yomthombo, abalawuli bokuhambisa baya kuba nako ukubandakanya ngokulula abaqhubi kwii-software zabo zokugcina.
ICanonical kunye ne-SUSE zikhankanywa njengabaphuhlisi abanokudibanisa iimodyuli ngoku yeenkozo ezivulekileyo kulwabiwo lwazo.
"Iimodyuli ezintsha ze-GPU ezivulekileyo zikaNvidia ziya kwenza lula ukufakwa kunye nokwandisa ukhuseleko kubasebenzisi be-Ubuntu, nokuba ngaba baphuhlisi be-AI / ML, abadlali bemidlalo okanye abasebenzisi bekhompyutha," watsho uCindy Goldberg, usekela mongameli weSilicon Alliances.
Abaqhubi abatsha kufuneka bafike ku-Ubuntu 22.04 LTS kwiinyanga ezimbalwa ezizayo. U-Nvidia usebenze kunye neCanonical kunye ne-SUSE, kunye ne-Red Hat, ukuphucula ukuthunyelwa kwephakheji kunye nokudala imodeli yenkxaso engcono kubathengi. Ukubonelela ngomxholo ongakumbi, umlawuli we-Red Hat uChristian Schaller uthe kwiposti yebhlog ukuba abagcini bomqhubi we-Nouveau (iprojekthi yokuvelisa abaqhubi basimahla bekhadi lemifanekiso ye-Nvidia ngobunjineli obubuyisela umva) kwaye i-kernel idibene noNvidia kwinyanga ephelileyo.
"Yinxalenye ye-kernel, uninzi lomqhubi wegraphic wanamhlanje ukwi-firmware kunye neendawo zomsebenzisi kwaye ezo zihlala zivaliwe." Kodwa oko kuthetha ukuba ngoku sinomqhubi we-Nvidia kernel oya kuqala ukukwazi ukusebenzisa i-GPL-kuphela i-APIs kwi-Linux kernel, nangona ukukhutshwa kokuqala akuyi kudla nayiphi na i-APIs engazange isetyenziswe ngumqhubi wangaphambili. Ubhale uSchaller. Owokugqibela wongeze ukuba i-Nvidia ekhoyo i-Nouveau kunye nomqhubi webinary iya kuhlala isendaweni, naxa umqhubi omtsha womthombo ovulekileyo ephuhliswa.
Ngamafutshane, eli linqanaba langoku lenzame zomqhubi we-kernel we-Nvidia ovulekileyo. Nangona kunjalo, imithombo emininzi inika ingxelo yokuba uNvidia ukhankanye ngoLwesithathu ukuba "ezi modyuli zivulekileyo ze-kernel ngaphandle komthi zilinyathelo nje eliya kwinkxaso engcono yeLinux."
Okokugqibela ukuba ufuna ukubonisana nekhowudi yomthombo ekhutshiweyo, ungayenza ukusuka eli khonkco lilandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukusuka kwiLinux » Izaziso » INvidia ikhuphe ngokusemthethweni ikhowudi yeemodyuli zayo ze-GPU zeLinux
I-Canaima 7: Inkqubo yokufakela i-beta yokuqala yoluntu ekhoyo